Xaqiijinta weerarrada & mdash; Khabiirka Cilmi-baarista (Exalt Expert) wuxuu sharxayaa sida loola dagaalamo
Kalluumaysiga waa nooc caadi ah ee dambiyada internetka. Inkastoo ay jiraan warar badan oo ay shakhsiyaadka ku saabsanyihiin iyaga oo kufilmaamaya phishing, waxaa jira tallaabooyinka ay qaadi karaan si ay u garaacaan. Marka laga reebo rakibidda barnaamijka amniga, waa in qofku bartaa waxa la rabo in uu la dagaallamo.
Marka la baro sida loo aqoonsado calaamadaha tilmaamaya jajab suurto gal ah, user ayaa markaas ka dib u sahlanaan doonta in la qaado qiyaasta liiska waxtarka leh, oo uu soo jeediyo Oliver King, Maareeyaha Guusha Macaamilka ee Semt Adeegyada Dijitaalka ah - собака такса купить phpbb.
Waa maxay kalluumeysiga?
Kalluumeysiga waa nooc aqoonsi ah oo ka dhexjirta khayaanada. Kuwani waxay isticmaalaan boggaga khiyaanada leh iyo emayl-been ah si ay ugu soo jiidaan dhibbanayaasha aan aqoonta lahayn si ay u xadidaan macluumaadkooda gaarka ah. Inta badan, waxay kaliya u baahan yihiin macluumaadka kaararka deynta, iyo passwords.
Adoo diraya xiriirinta shakhsiyaadka aan waxba galabsan, waxay xaday macluumaadka sida ugu dhakhsaha badan markay galaan goobta. Waxay bixiyaan xariiryo u muuqda kalsooni si loo helo kalsoonida. Inta badan goobaha la jajabiyey waxaa ka mid ah PayPal, eBay, Yahoo !, iyo MSN. Xaaladaha qaarkood, hay'adaha maaliyadeed qaarkood waxay u adeegaan sidii bartilmaameedyo.
# 1. Si taxadar leh ula soco markaad soo gasho website-ka kaas oo ka codsanaya macluumaad qarsoodi ah gaar ahaan haddii uu yahay qaab dhaqaale. Ururrada sharci dejinta intooda badani marnaba weydii macaamilka inay bixiyaan macluumaadka noocaas ah.
# 2 Haddii websaydhku ku adkeysto in la siiyo macluumaad xasaasi ah, ka dibna waxa laga yaabaa inuu yahay dabin..Qaarkood waxay jecelyihiin inay isticmaalaan xeeladaha cabsida, mararka qaarna waxay ku hanjabaan in ay leeyihiin xisaabtahaani naafo haddii aan macluumaadka qaarkood la helin. Si toos ah ula xiriirida ganacsadaha si aad u xaqiijiso aqoonsigooda waxay fure u tahay in laga baxsado isku dayga kaluumeysiga.
# 3. Ka hor inta aanad sameynin wax xiriir ah oo ku saabsan goobta, waxay barataa siyaasadda asturnaanta. Inta badan bogagga shabakadda ganacsigu waxay leeyihiin siyaasad gaar ah oo ay si fudud ugu heli karaan bogga ugu sarreeya. Siyaasadahooda, raadi liiska boostada, si aad u ogaato haddii ay doonayaan ama aysan iibin doonin.
# 4 Codsiyada eegitaanka guud ee macluumaadka waa calaamad kale oo muujinaysa waxqabadka kaluumeysiga. Calaamadaha been-abuurka ah badanaa badanaa ma aha kuwo shakhsiyan ah. Boostada rasmiga ah ee bangiga had iyo jeer waxay leedahay xisaab tixraac ah haddii midkood uu furay mid iyaga la socda. Ololaha xayeysiiska waxay ku jiri karaan "Mudane Sir / Madam" iyaga oo halkaa ku jira, halka qaar kalena sharxi karaan xisaabiyeyaasha in uusan isticmaali karin xataa.
# 5. Haddii fariin email ah uu ku jiro foomka ku-meel-gaadhka ah, ikhtiyaarka caqliga leh ma aha inuu buuxiyo. Khasaaradu si sahal ah ayey ula socon karaan dhammaan macluumaadka lagu soo galo foomamkaas.
# 6 Marka la isku xiro website-ka, mid waa inuu nuqul ka dhejiyaa oo ku dhajiyaa xiriirka cinwaanka cinwaanka browserka oo aan ku xidhneyn isku-xirnaanta. Kaliya sidaas samee haddii ay jirto hubin xaqiiq ah. Mararka qaarkood, qaar ka mid ah boggaga phishing ayaa u egyihiin kuwa la midka ah. Eeg cinwaanka cinwaanka cinwaanku waa inuu qofka ku wargeliyaa haddii dhammaanba ay tahay nuqul.
# 7. Khubarada badankooda waxay dadka ugu baaqaan in ay haystaan, oo ah barnaamij firfircoon oo hufan si loola dagaallamo hawlaha phishing ee kombiyuutarkooda. Mid ka mid ah barnaamijyada la soo jeediyey waa Norton Internet Security, oo si toos ah u ogaanaya waxqabadyada kaluumeysiga iyo xayawaanka. Software ma ogola website-yada been-abuurka ah iyo sidoo kale waxay xaqiijinayaan wax-qabadyada waaweyn ee bangiyada ama wax-qabadyada adeegga ee isticmaalaha.